मोन्टेनेग्रो बनाम रोमानिया - विश्व कप योग्यता | फुटबल अनुमानहरू
मिलान मिति:4सेप्टेम्बर 2017 | पोस्ट:4सेप्टेम्बर 02:02 2017 GMT +2| सुझाव हेरिएको 594 पटक.
मोन्टेनेग्रो बनाम रोमानिया – विश्व कप योग्यता
मोन्टेनेग्रो बनाम रोमानिया – विश्व कप योग्यता, मोन्टेनेग्रो संग समूह ई मा 2nd छन् 13 अंक. तिनीहरूले डेनमार्क रूपमा अंक नै रकम छ तर तीन अंक पोल्याण्ड पछि अनुगामी छन्. तीन दिन अघि काजाकिस्तान मा पत्यार पार्र्ने विजय रेकर्ड पछि, तिनीहरूले यो खेल मा आ भरोसा पूर्ण हुनेछ. दोस्रो स्थान पुग्नु आफ्नो आशा धेरै जीवित छन् र एक धेरै पनि समूह के हो तिनीहरूले मा क्षणमा एक राम्रो स्थितिमा छन्. They`ve घर यो चक्र मा राम्रो ठोस गरिएको, thrashing काजाकिस्तान र आर्मेनिया, जबकि मात्र पोल्याण्ड अंक खोने. यस खेलका लागि Tumbakovic निपटान मा आफ्नो पूर्ण दस्ते हुनेछ.
रोमानिया संग 4th छन्9अंक, दुवै आर्मेनिया विरुद्ध रहेको संग मात्र दुई WINS रेकर्ड भएको. पछिल्लो एक, जो तीन दिन पहिले आए, एक राम्रो unconvincing थियो, तिनीहरूले मात्र 91st मिनेटमा आर्मेनियालीहरूको तोड्न व्यवस्थित देखि. तिनीहरूले 55th मिनेटमा एक दण्ड सम्झना गरे, तर यो प्रदर्शन र अन्त चार खेल winless रन ल्याउन एक गरिब तरिका अझै पनि कतै नजिकै चाहेको थियो. तिनीहरूले देखि अलग आफ्नो खेल को सबै unconvincing देख्यो 5:0 आर्मेनिया को thrashing र तिनीहरूले पुगन दोस्रो स्थानको रियल संभावना बिना वस्तुतः छन्. मोन्टेनेग्रो जस्तै, रोमानिया पनि यहाँ पूर्ण दस्ते संग हुनुपर्छ.
मोन्टेनेग्रो यी क्वालिफायर समयमा राम्रो प्रदर्शन देखाए, आर्मेनिया विरुद्ध मात्र हार नकारात्मक उदाहरण बाहिर उभिरहेका संग. अर्कोतर्फ रोमानिया, आफ्नो दृष्टिकोण संग dissapointed र आफ्नो परिणाम झल्काउने. मोन्टेनेग्रो समूहमा दोस्रो स्थान सुरक्षित को व्यावहारिक संभावना छ, विशेष गरी अन्तिम मुठभेड तिनीहरूलाई पिटाई पछि तिनीहरूले अक्टोबर मा डेनमार्क पाहुना थाह. त्यसैले, तिनीहरू यहाँ तीन अंक को लागि खोज गरिनेछ, र तिनीहरूले काजाकिस्तान मा राम्रो शो पछि तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास हुनेछ. विचार मोन्टेनेग्रो घरमा खेलिरहेका छन्, र आफ्नो समग्र राम्रो छाप, म तिनीहरूलाई यहाँ मनपर्ने हुन विचार. र गर्दा रोमानिया एक stalemate बाहिर पीसने सक्छ, म ती सबै तीन अंक लिएर हेर्न can`t. त्यसैले, संग समर्थन होस्टहरूको0एशियाली बाधा जाने एक सही तरिका जस्तै देखिन्छ.
Olympiacos Piraeus vs Tottenham ( अन्तर्गत 2.5 लक्ष्य & 1.90 )